US Njem gaa Europe: Onye isi ala nyere okwu n'okwu ụbọchị ole na ole
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » US Njem gaa Europe: Onye isi ala nyere okwu n'okwu ụbọchị ole na ole
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Merkel na Biden na-atụle Njem US na Europe
Onye isi ala German bụ Angela Merkel bụ onye ndu Europe mbụ gara leta Onye isi ala US Joe Biden na White House ka a tụlere isiokwu gụnyere njem US gaa Europe.
Onye isi ala German bụ Angela Merkel bụ onye ndu Europe mbụ gara leta Onye isi ala US Joe Biden na White House dịka isiokwu gụnyere njem US na Europe bụ na isiokwu.
Isiokwu nke okwu mba abụọ ahụ gụnyere mgbanwe ihu igwe, ọgwụ mgbochi COVID-19, mwakpo cyber Russia, Ukraine na ịkwado ọchịchị onye kwuo uche ha, yana njem n'etiti US na Europe.
Ọganihu na nso nso a na ikpe COVID-19 n'ihi Delta dị iche iche etinyela aka na mgbochi njem US na-emebeghị.
Chancellor Merkel gosipụtara na ya nwere ntụkwasị obi na ndị otu COVID nke America.
Onye isi ala Joe Biden kwuru na n'oge na-adịghị anya ọ ga-enwe ike ịza ajụjụ gbasara njem ị ga njem site na Yurop dịka ọ kpọbatara ndị otu COVID ya mgbe Chancellor Merkel jụrụ ajụjụ a n'oge mkparịta ụka ha na mba abụọ taa. Merkel kwuru na ya nwere "ntụkwasị obi niile na ndị otu COVID nke America."
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Europe belatala mgbochi maka ndị njem America n'ọnwa gara aga, US na-edebe ihe mgbochi njem siri ike na ebe n'ihi mgbasa nke ụdị Delta.
Onye Njem Na-ahụ Maka Njem Ọchịchị US na-ahụ maka Ọha na Ọha na Iwu Tori Emerson Barnes wepụtara nkwupụta na-esonụ na okwu Onye isi ala Biden banyere ịmaliteghachi njem mba ụwa:
“Anyị na-anabata nkwupụta onye isi ala, nke enyere taa na German Chancellor Angela Merkel, na ozi ndị ọzọ banyere oge maka iwepụ mmachi njem mba ụwa nwere ike ịbịa‘ n’ime ọtụtụ ụbọchị na-esote.